Ciidamada ONLF ee Eriteriya joogay oo gudaha Itoobiya soo galaya – Radio Daljir
Ciidamada ONLF ee Eriteriya joogay oo gudaha Itoobiya soo galaya
Noofember 20, 2018 4:24 b 0
Ciidamada ONLF ee ku sugnaa wadanka Eriteriya ayaa bilaabaya beri oo Arbaco ah inay gudaha usoo galaan wadanka Itoobiya, iyadoo ay qayb ka tahay heshiiska ONLF iyo Itoobiya.
Maxamed Ciilmooge , afhayeenka ONLF ayaa sheegay inay tilaabadani ay qayb ka tahay heshiiska ay la galeen Itoobiya, iyadoo jamhadda Oromada ay horay ay u soo xaroodeen.
Waxaa uu afhayeenku tilmaamay in ciidamada ay tagi doonaan magaalada Jigjiga ee xarunta maamulka Soomaali Galbeed, iyadoona uu sheegay soo dhowayn balaaran in loo samayn doono.
Afhayeenka ayaa sheegay ciidamada horay qaybtood inay usoo xaroodeen, dhowr boqol oo kallena la filayo beri oo Arbaco ah inay bilaabaan inay soo xaroodaan.
Nin Hubaysan oo dhaqtar iyo boolis ku dilay magaalada Chicago ee Mareykanka